काठमाडौंबाटै भारतीय नागरिकले लिए वंशजको नागरिकता - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंबाटै भारतीय नागरिकले लिए वंशजको नागरिकता
काठमाडौं, भदौ १७ । ललितपुरमा स्टेपिङ स्टोन प्रि स्कुल सञ्चालन गरिरहेका अंगद सिंह नामक एक संदीग्ध भारतीयले झुठो विवरण देखाएर काठमाडौं जिल्लाबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको खुलासा भएको छ ।
अंगदका हजुरबुवा प्रितम सिंह अहिले पनि भारतीय नागरिक नै हुन् । तर उनी वर्षौदेखि नेपालमा व्यवासाय गरेर बस्दै आएका छन् । वर्षौ नेपालमा बस्दा पनि प्रितमले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न सकेनन् । तर उनका नातिले नेपाली प्रशासनको कमजोरीको उपयोग गर्दै भारतको नागरिकता त्यागेर नेपालबाट वंशजका आधारमा नागरिकता फुत्काएका लिन सफल भएका छन ।
जबकी भारतको नागरिकता त्यागेको मान्छे नेपालमा वंशज हुन सक्दैन । सन् २००१ मा भारतीय दूतावासले उनलाई भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गरेको थियो । अंगदको भनाइ अनुसार उनले भारतको नागरिकता पनि लिए ।
आमा भारतीय भएका कारण उनले भारतको नागरिकता लिए । जब उनलाई नेपालको नागरिकता आवश्यक पर्यो उनले भारतको नागरिकता ८ वर्ष अगाडि त्यागेर बाबुको नामबाट नेपालमा नागरिकता लिए । उनको हजुरबुबासँग अहिलेपनि भारतीय नागरिकता रहेको छ ।
बाबुले भने नेपाली नागरिकता लिएका छन् । हजुरबुवा भारतीय भएपछि उनको छोराको वंशज नेपाली हुँदैन । नातिले भारतको नागरिकता लिएर त्यागेको अवस्थामा वंशज हुँदैन ।
अंगदले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ६७ साल साउन २५ मा नेपाली नागरिकता लिएका हुन । त्यो पनि वंशजका आधारमा । उनको नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत सागरमणि पाठकको हस्ताक्षर छ ।
भारतको नागरिकता त्यागेको मान्छेले कसरी नेपालमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछ ? भन्ने प्रश्नमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा भन्छन्, ‘भारतको नागरिकता भए नभएको सबै लुकाएर, बाबुको नागरिकताका आधारमा मात्रै विवरण पेश गरेर वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको हुन सक्छ ।विवरण लुकाएको प्रमाणसहित उजुरी पर्यो भने उनका नागरिकता बदर गरिदिन्छौं ।’
याे पनि पढ्नुस १८ लियो क्लबले अध्यक्षका लागि सिफारिस गरे गुरागाईंलाई
विवादास्पद अंगदको मात्रै होइनन, अब नागरिकता त उनको आमाको पनि छानविन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले आमाको नामबाट ८ वर्ष भन्दा अगाडि भारतीय नागरिकता लिएको खुलाएका छन् ।
सामान्यतः भारतबाट नेपालमा बिहे गरेर आएपछि भारतीय महिलाहरुले नेपालको नागरिकता लिन्छन् । अंगदले आमाको नामबाट भारतको नागरिकता लिएको बताएका छन् । अब उनकी आमा कमल सिंहको पनि नागरिकता छानविनमा पर्ने देखिन्छ । किनभने उनी नेपालको नागरिक हुन कि हैनन् ? हुन् भने त अंगद फस्ने सम्भावना अझै छ । हैनन् भने पनि उनको नागरिकता विवादको घेरामा परिसकेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नाति आफ्नो स्कुलमा पढ्ने भन्दै अंगदले शुल्क महंगो भएको आफ्नो विद्यालयको ब्राण्ड स्थापना गर्न लागिपरेका छन् । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो विद्यालयलाई पत्याएको भन्दै उनले प्रचण्डका कान्छी बुहारीतर्फका नाति प्रणव दाहाललाई मोडलको रुपमा प्रयोग गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन आवश्यकः उपप्रधानमन्त्री यादब
विद्यालयको कक्षा कोठामा खेल्दै गरेका प्रणवको फोटो उनले सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका थिए जुन दिन प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
प्रणवका बुबा प्रकाश दाहालले अंगदले झूठा प्रचार गरेर आफूहरुलाई बदनाम गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्ना छोरा केही महिनायता आमा बीनासँगै काठमाडौं बाहिर रहेको दाहालले बताएका छन ।
दाहालले आफ्नो छोरा अंगदले संचालन गरेको विद्यालयमा भर्ना नभएको र बाहिर आएको हल्ला कपोकल्पीत र भ्रामक भएको बताएका छन ।
ट्याग्स: Kathmandu, nepali citizenship